Kaangaga Kantaroolka ah ee Kanye West ee la Awoodi Karo - Dadka - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE »Kanye West guryo la awoodi karo oo hoos timaada calaamadda Star Wars - dadka
Dagaalyahannada Guryaha la Bixin Karo ee Kanye West - Dadka
Aragtida Kanye West ee dhismaha guryo jaban oo la mid ah sida Tatooine ayaa dumay isla markaana la gubay deriska ku yaal agagaarka Calabasas.
Astaanta caanka ah ee rap-ga ayaa si adag u shaqeeysay si ay u dhisto guryo qurux badan oo uu damacsanaa inay u adeegsadaan guryo la awoodi karo. waxaa soo xigtay Waaxda Adeegyada Dadweynaha ee Magaalada Los Angeles ee dhismaha aan ruqsada haysan. Waa inuu hadda qaab-dhismeedka u hoggaansamaa ka hor Sebtember 13 - ama dumiyaa, sida uu soo wariyay Curbed LA.
Tozeur, Tunisiya - 17 May 2017: Guryaha meeraha "Tatooine", oo ah filim loogu talagalay Star Film Wars. Mid ka mid ah laba Mos Espa set of The Phantom Menace. (Anna Chaplygina / Getty)
Galbeedka waxaa hada loogu yaqiinsaday niyad dhisida ganacsigeeda, laga soo bilaabo caan-ka-noqoshada hip-hop ilaa dabaasha, hindhisada ilaa socod-baradka iyo guryo la awoodi karo.
Dakhliga hooseeya ee guryaha caanka ah, oo umuuqda kuwa kuyaalla shinnida, ayaa lagu sharaxay inay yihiin "lafaha meelaha bannaan ee alwaaxda". Macluumaad dheeri ah, Tatooine waa meeraha ciidda ah ee uu Luke Skywalker ku soo koray bungalow u eg qaab-dhismeedka u eg
Af hayeenka howlaha guud Curled LA ayaa qiimeeyay
ayuu yiri afayeenka howlaha guud
laba cabasho oo qarsoodi ah oo ku saabsan dhismeyaasha qaab "xanjo". Isaga iyo afadiisa, xiddigta dhabta ah ee TV-ga Kim Kardashian, waxay haysataa maalmo 45 inay u soo gudbiso qorshayaasha wasaaradda oggolaanshaha, dumiso dhismayaasha ama bixiso qiyaastii 1 400 dollars ganaax.
Markay Meghan Markle soo bandhigtay joornaal ay la socoto Kate Middleton